2008-01-23 @ 10:21 in Finoana
Tamin'ny herinandro dia nahazo taratasy A4 ireny ny olona tao an-trano. Ankizy hoe no nanatitra azy tao an-trano. Tsy nisy niraharaha izay tao anatiny ny olona fa izaho fotsiny no gaga nahita azy nivalapatra teo an-databatra. Dia io misy hoe "sary mahavita fahagagana" amin'ny teny frantsay. Dia avy amin'izay ny filazana hoe nisy filohan'i Arzantina nahazo toa io taratasy dia noheveriny ho vazivazy ka tsy noraharahiany kanjo 8 andro taty aoriana dia maty ny zanany vavy. Nisy hafa indray nanaraka ny zavatra notadiavina dia nahazo tamin'ny lôtô.
Tonga ny filazana hoe mandefasa ity taratasy ity amin'ny olona 20, dia asa ianareo raha nanaraka aloha na tsia fa dia nahazo indray aho omaly ary tamin'ny mailaka no nahazoako. Malagasy ny mpandefa ary saiky Malagasy avokoa ny andefasana, olona miisa ho 50 angamba no nandefasany tao. Dia inona ary ity? Izaho aloha manao hoe aza aparitaka rangahy io zavatra io fa tiako ho fantatra aloha hoe iza ilay filoha Arzantin nahazo ilay taratasy dia maty ny zanany afaka valo andro, tamin'ny oviana koa izany fa hojereko ny tantara a! Sahala ireny hoe matahotra ozona ireny avokoa isika. Dia tahaka ny hoe mandefa ozona aty amiko ianao mandefa ireny zavatra ireny aty amiko. Izay ange no naha-jentilisa ahy e! Ny ahy filazana tsotra fa tsy hiangavy anareo mihitsy aho hampiely azy! Ary sary taiza ary io no nalaina?